Zvese zvinhu zvikuru zvine zvidiki zvekutanga. - Peter Senge - Quotes Pedia
Zvese zvinhu zvikuru zvine mavambo madiki. - Peter Senge
Sezvatinokura, isu tese takaita zvishuwo zvakasiyana muhupenyu. Zvinotanga nekuda kwekusimudzira kwakasiyana kwatinoona kwakatikomberedza uye nezvakasiyana zviitiko zvatiinazvo sezvo hupenyu huchienderera. Kuti tizadzikise zviroto zvedu, tinowanzo funga kuti tinoda zviwanikwa zvakawanda zvatisina.
Isuwo pane dzimwe nguva, kukahadzika kwedu pachedu-kufunga kwedu kugona hakuna kukwana. Panguva ino, isu tinofanira kumira uye kufunga. Izvo zvakakosha kuti uzvitende pachako. Isu tinofanirwa kuzvikudza isu pachedu, kunyangwe kubudirira kwakati zvakare.
Isu tinofanirwa kushinga kubva pakubudirira kudiki uye kuvaka kuvimba kwedu pavari. Zviitiko zvakasiyana zvinotiratidza maguru akasiyana muhupenyu. Inotidzidzisa zvidzidzo zvakasiyana siyana zvinotibatsira kukura. Naizvozvo, tinofanira kubvuma zvinhu zvidiki kwazvo tovaka nazvo. Inopa mukuzadzisa chishuviro icho isu tese taive nacho.
Dzimwe nguva, isu tinonzwawo kuti mupiro wedu kune chakakura chikonzero hauna basa. Asi isu tinofanira kuziva kuti nhanho diki diki dzakakosha. Isu tinoita sekufurira vamwe avo vangazopawo rubatsiro. Iri ketani mhedzisiro inoita chimwe chinhu chakakura uye chine chakakosha kukanganisa zvakare.
Naizvozvo, isu tinofanirwa kutenda mukugona kwedu uye tirege kuramba kubva pachinhu chakaitwa nevavariro dzakanaka. Kunyangwe kana isu tiri kunetseka uye tisingakwanise kuona mwenje kumagumo emucheto, isu tinofanirwa kusimudzira kumagumo edu.
Izvo zvingave zvisina musoro mune izvozvi, zvine musoro gare gare sezvatinoyeuka fond fond dze kuzadzisa zviroto zvedu gare gare.
Great Quotes Kune Vana
Pfungwa Huru Pane Kubudirira
Kubasa Kubasa Quotes
Chikuru Kwazvo Makotesheni
New Kutanga Quotes
Quotes Pamusoro Pezve Nyowani
Quotes Pamusoro pekutanga uye Shanduko
Kuduku Kufungwa Kwezuva